ndakọrịta na windo 10
ndakọrịta na windo 10 3 afọ 4 ọnwa gara aga #344
Is FSX dakọtara na windo 10?
Daalụ maka nzaghachi gị.
ndakọrịta na windo 10 3 afọ 4 ọnwa gara aga #345
Ee, ọ na-arụ ọrụ na Windows 10. M na-eji FSX na Windows 10 ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
ndakọrịta na windo 10 3 afọ 4 ọnwa gara aga #346
Ọ BỤRỤ na i nwere okwu ọ bụla, saịtị a nwere ike inye aka. Enyi m na-agba Steam Edition ma na-enwe nsogbu ụfọdụ.
ndakọrịta na windo 10 3 afọ 4 ọnwa gara aga #347
Gh0st ,,, nwere ajụjụ maka gị ,,,
Enwere m nsụgharị nke FSX Mpempe akwụkwọ GOLD na igbe CD nke Microsoft site na afọ nlegharị anya ugbu a.
Ana m eji nsụgharị ahụ eme ihe kemgbe ogologo oge na PC okenye ma chọọ ịnweta
na FSX n'ime njedebe ọhụụ dị elu m naanị PC enwere m ugbu a. Anọ m na-eche inweta STEAM FSX ụdị,,,
mana achorom agha obi ike na - eme ka STEAM meghari nkem FSX Ekemede igbe CD GOLD Edition
na-arụ ọrụ na Win 10 nke m nwere na nnukwu ọhụụ ọhụrụ PC PC.
Agụrụ m ya FSX Dị CD Boxon GOLD adịghị arụ ọrụ ọzọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnwe ya FSX Mpempe akwụkwọ GOLD na
Win 10 PC ọhụrụ.
Ajụjụ a, enwere m ike iji igbe CD m FSX Dị GOLD dị na Win Win 10 ọhụrụ njedebe PC maka ọtụtụ
afọ na-abịanụ,, ma ọ bụ aghagharịrị m ụdị STEAM nke FSX ?
Daalụ di na nwunye!
ndakọrịta na windo 10 3 afọ 4 ọnwa gara aga #348
Ezigbo nwoke, echeghị m. Akwụkwọ Ntaneti gị ga-arụ ọrụ site na ihe m gụrụ Ebe a
M ka na-agba ọsọ Windows 7 na desktọọpụ m, na iji Gold Edition.
Colonelwing dere, sị: Gh0st ,,, nwetara ajụjụ maka gị ,,,
afọ na-abịanụ,, ma ọ bụ m ga-eme ka ịgbanwee gaa na ụdị STAEM nke FSX ?
ndakọrịta na windo 10 3 afọ 4 ọnwa gara aga #349
Daalụ nnọọ Gh0st!
Ee, echere m na ọ ka ga-arụ ọrụ nke ọma, dị ka m na-eji ọ bụla online ndụ efe na m mbipute na mgbe ofufe offline.
gbanyụọ PC m ma ọ bụ banye zipfile iji nọrọ ebe ahụ ruo mgbe ọ dị m ka m fefuru ha ọzọ FSX sim faịlụ ọzọ.
Ihe m na ebumnuche bụ itinyegharị PMDG B737NGX si n'ụdị igbe DVD m gaa na PC ngwụsị dị elu siri ike m nwere ugbu a maka Simulators naanị. Anam eche na ọ ga-abara m uru dị ka ihe m gụrụ na STEAM, ha, enwebeghị ọtụtụ mgbanwe emere, ọ gaghị emetụta ụzọ m ga-esi efe efe. FSX maka ogologo oge ka odi n’iru.
Ugbu a dị ka anyị nọ na FSX sim isiokwu ,,, maka PC Win10 ọhụrụ m,,, Achọrọ m nnukwu osisi HOTAS Stick and trottle
nke na-arụ ọrụ nke ukwuu. Dika ihe ochie m na - eme Logitech na - akwadebe maka imezu ya, ma o nyere m otutu afo nke oma uzo.
Ị nwere ike depụta m ụfọdụ ihe egwu ị ga-atụle maka iji oge dị mma na nsogbu ma ọ bụ nsogbu, ma QControl ga-abụ oke oke ma ọ bụ njedebe.
Amaara m ahịa na ahịa, ma ọ ga-achọ ịnụ akụkụ gị nke akụkọ banyere HOTWA ị ga-egosi m na.
Ndị ọzọ niile nwere ike ịzaghachi banyere ihe ga-abụ ihe ọkụ ọkụ m kwesịrị ile anya iji jiri dị ka pilo pilo.
Ọ bụla price TAG ,, adịghị ihe m ...
Daalụ maka ịkekọrịta echiche na ahụmahụ gị na ọnọdụ ahụ mara mma ...
ndakọrịta na windo 10 3 afọ 4 ọnwa gara aga #350
naanị "ntanetị" n'igwe "m na-eji ya na-eji ụgbọ elu nsuso software lol ma ọ bụrụ na ị gaa Ebe a , ị ga-ahụ ụgbọ elu m, na ndị ọzọ na-efe efe. KDFW - LFRG - KDFW bụ ụzọ nkịtị m na-aga lol na "ụgwọ" bụ ezigbo mma lol
ndakọrịta na windo 10 3 afọ 4 ọnwa gara aga #351
Ụgbọ elu m, na ndị ọzọ na-efe efe. KDFW - LFRG - KDFW bụ ụzọ nkịtị m na-aga lol na "ụgwọ" bụ ezigbo mma lol
Ụgwọ ahụ bụ ezigbo eh ,,, lol
Dị ka a kpọtụrụ aha, Enweghị m elegharị anya n'Ịntanet, ọ bụ ihe ọhụrụ ọ bụla nye m. Ma ọ bụghị ọhụrụ nye m site na ezigbo ụgbọ elu ụwa ,, gwuo na ụzọ ụgwọ ọma ,, lol
Daalụ maka ịkekọrịta nke a na m onye mmekọ ,, Cheers!
ndakọrịta na windo 10 3 afọ 4 ọnwa gara aga #352
Colonelwing dere, sị: Ụgbọ elu m, na ndị ọzọ na-efe efe. KDFW - LFRG - KDFW bụ ụzọ nkịtị m na-aga lol na "ụgwọ" bụ ezigbo mma lol
Ozi VA m ọ bụrụ na ị pịnye Akaụntụ Aka, ma mee mgbakọ na mwepụ, ị ga-ahụ na m na-eme VA ụfọdụ ego dị mma. M na - agụnye ihe m na - eme dị ka onye na - anya ụgbọelu, ebe ọ bụ na m na - eji ya aka iji kwụọ ụgwọ maka nnụnụ ahụ
ugbu a ma ọ bụrụ na m na-eme ọtụtụ ihe na RL lol
ndakọrịta na windo 10 3 afọ 4 ọnwa gara aga #356
Daalụ maka onye na-ekerịta onye òtù ọlụlụ!
Oge ike page: 0.317 sekọnd